iOS app IOS Game
Android Root appများ
မိုးညိုသား ရဲ့ ဘလော့လေးကို လာရောက်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကြိုဆိုလျှက်ပါ နောက်လည်း လာလည်ကြပါနော် အားပေးပါ ဝေဖန်ပါ အကြံပြုပါ Friday, September 30, 2016
Windows တင် ရင် အခက် ကြုံ ရ မဲ့ ပြသနာ တစ်ခု ဖြေရှင်းနည်း
Windows တင် ရင် အခက် ကြုံ ရ မဲ့ ပြသနာ တစ်ခု ဖြေရှင်းနည်း ============================================
သင့် ကွန်ပျူ တာ ကို windows installing လုပ် တော့ မယ် ဆို ရင် သင့် ကွန်ပျူ တာ ရဲ့Hard Drive ဟာ UEFI mode သို့ မဟုတ် legacy mode တစ်ခုခု နှင့် မိမိရဲ့BIOS ဟာ ကိုက်ညီမှူ ရှိ ရ ပါမယ်။
( ဥပမာ - ) အနေ နှင့်“Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is not of the GPT partition style” Message
ပေါ် လာ ပြီး windows install လုပ်ဆောင် မရ ပဲ ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။
ဒါကို ဘယ်လို ဖြေ ရှင်း မလဲ ဆို ရင်တော့ ကျွန်တော် တို့gpt အဖြစ်
ပြန်ပြောင်းပေး ပြီး မှ သာ Window တင် နိုင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ပြောင်း လဲ ပုံ အဆင့်ဆင့်များ အဆင့်( ၁ ) ------------------------------
အရင်ဆုံး မိမိ ကွန်ပျူ တာ ကို restart ပြန် ချ ပါမယ်။ အဆင့်( ၂ ) ---------------------------------
windows ပြန်တက်လာ တာနှင့် F10 ကိုနိုပ်ပြီး command prompt ကိုဖွင့် ပါ ။
အဆင့်( ၃ ) -------------------------------- cmd / command prompt ထဲ မှာ အောက် က စာ သား တွေ ကို ရိုက်ထည့် ပေးပါ။
(1 ) diskpart ကို ရိုက်ပါ။ enter ခေါက်ပါ။
(2 ) list disk ကို ဆက်ရိုက်ပါ။ enter ခေါက်ပါ။
(3 ) select disk ( formart ချ ချင် တဲ့disk ကို ရိုက်ပါ )
clean ကိုရိုက်ပါ enter ခေါက်ပါ။
convert gpt ကို ၇ိုက်ပါ enter ခေါက်ပါ။
exit ကိုရိုက်ပြီး ထွက်လိုက်ပါ။
အဆင်ပြေ ပါ စေ
Xiaomi Mi4i Miui8 Root and Myanmar Font
Android Root, Xiaomi
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် ပို့စ်တွေမရေးတော့တာ တစ်နှစ်ကျော်နေပါပြီ.. တနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Xiaomi Mi4i လေး MiUi 8 ကို Update လုပ်မိပြီးတော့ မြန်မာစာမရတော့လို့ လာလုပ်ခိုင်းထားတာလေးကလိရင်း တိုင်ပတ်သွားတယ်၊ အရင်တုန်းကလည်း ကျွန်တော်ပဲ Root လုပ်ပြီး မြန်မာစာ ထည့်ပေးထားတာ Update ဖြစ်သွားတော့ အရင်သုံးနေကျ Root Tool တွေလည်း အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး ဒါနဲ့ အလွယ်တကူ အဆင်ပြေမယ့် Font အစားထိုးတဲ့နည်းတွေ iFont ကနေ Themes Font လုပ်ပြီးထည့်တာတွေ အစုံပါပဲ တစ်ခုမှ အဆင်မပြေပဲ ရွာလည်နေတာနဲ့ လျှောက်မွှေလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ ဒါ Tools လေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားလို့ ကျွန်တော် ကဲ့သို့ တိုင်ပတ်သူတွေရှိရင် အလွယ်တကူ အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်၊....
လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကို ဒီနေရာမှာ အရင်ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
လိုအပ်တာတွေယူ ပြီးပြီဆိုရင် .. ဖုန်းကို Setting >> Additional Setting >> Developer Option >> USB Debugging လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားပြီးတော့ USB Debugging ကို On ပေးပါ.. Fastboot Mode ကလည်း On ပေးပါ၊ Developer Option ကိုမတွေ့ရင် Setting >> About Phone >> MiUi Version ကို ၇ ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးသွားရင်တော့ ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ ဒေါင်းယူထားသော ဖိုင်ထဲမှ Root kit ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ Rec.bat ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် 1 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ ဖုန်းမှာ Fastboot Mode ထဲရောက်သွားပြီးတော့ Root လုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ် ၊ Reboot ကျပြီးတော့ ပြန်တက်လာရင် ဖုန်းမှာ Super Su လေးရောက်နေတာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
မြန်မာစာအတွက်ကတော့ Miui8 Fontchanger နဲ့ထည့်လိုက်ပါ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။။။
အခြား မိမိနှစ်သက်ရာ Font များကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Thursday, September 15, 2016
Asus Zenfone2 5.0 Root / Z00D
မင်္ဂလာပါ Asus Zanfone2 5.0 ကို Root လုပ်ဖို့ သူငယ်ချင်းတွေမေးနေကြလို့ အပြည့်အစုံကို ဒီကနေပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. သိပြီးသားသသူများဆိုရင်တော့ကျော်သွားလိုက်ပါ Root မလုပ်ခင် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးတွေကို အရင် ဒေါင်းလိုက်ပါ၊
PASSWORD =>> moenyothar
ဒေါင်းလို့ပြီးပြီဆိုရင် adb install အရင်လုပ်ပါ၊ Y ကိုသာ နှိပ်ပြီး Enter ခေါက်သွားလိုက်ပါ၊ ပြီးရင် Intel Driver
ကို install လုပ်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ ဖုန်းထဲမှာ USB Debugging ကို On ထားလိုက်ပါ။
Note = USB Debugging ကို ဖွင့်ဖို့ Developer Options ရှာမတွေ့သူများ Setting >> about Phone >> Software information >> Build Number ကို ၇ ချက် ဆက်တိုက်နှိပ်လိုက်ပါ၊ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်
အားလုံးပြင်ဆင် ပြီးသွားပြီဆိုရင် Root File ကို Zip ဖြေလိုက်ပါ၊ အထဲမှ UPDATE-SuperSU-v2.46 zip ဖိုင်လေးကို ဖုန်းထဲ Copy ကူးထည့်ထားလိုက်ပါ၊ ပြီးသွားရင်တော့ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။
ဒေါင်းလုတ် လုပ်ထားတဲ့ Root File ထဲမှ Launcher ကို Right Click ခေါက်ပြီးတော့ Run as Administrator နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ၊ အောက်ပါ ပုံအတိုင်း ထွက်လာရင် ACCEPT ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ၊
နောက်တဆင့်မှာတော့ TWRP CWM ကြီုက်ရာရွေးနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ 1 ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်
1 ကိုရွေးပြီးတော့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ဒီအဆင့်မှာတော့ T1, T2, T3 အထိတစ်ဆင့်ချင်းနှိပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်တိုင်းမှာ failed ဖြစ်မှာပါ စိတ်မပူပါနဲ့ T1 နှိပ်မယ် Process ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပေးပါ Press Any Key ဆိုတာနဲ့ Enter ခေါက်မယ် ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့ T2 ကိုဆက်နှိပ်မယ် ဒီလိုပဲ သူ့ Process ပြီးသွားတာနဲ့ Press Any Key ဆိုတာနဲ့ Enter ခေါက် ပြန်ထွက်တာနဲ့ T3 ကိုထပ်နှိပ် T3 Process လည်း အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Twrp ကတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်.. Twrp ကနေ ကျွန်တော်တို့ စောစောက ဖုန်းထဲကို ထည့်ခဲ့တဲ့ Super Su zip ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊ ပြီးသွားရင်တော့ Reboot System ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊ ဖုန်းပြန်ပွင့်လာတာနဲ့ Super user လေးရောက်နေတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာစာအတွက်ကတော့ မိမိ နှစ်သက်ရာ app ကိုသုံးပြီးတော့ install လုပ်ပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။ Wednesday, May 27, 2015
COC သမားတွေအတွက် Application ကောင်းလေးတစ်ခုပေးမယ်ဗျာ... ပို့စ်တွေမတင်ဖြစ်တာလည်း တော်တော်ကြာပါပြီ.. ဒါလေးကတော့ COC ကိုရူးသွပ်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ရေးပေးလိုက်တာပါ.. ဒီကောင်လေးကတော့ coc ကိုကစားဖို့ပျင်းတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်.. မအားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် .. သူက auto ကစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ Trial အနေနဲ့ တစ်နာရီသာ ကစားခွင့်ရပြီးတော့ အချိန်ပြည့်ကစားချင်ရင်တော့ ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်.. နာရီအနည်းငယ်အတွက်ကတော့ အကောင့်အသစ်တွေ ဖွင့်ပြီးတော့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်.. အကောင့်အသစ် တစ်ခါဖွင့်တိုင်း တစ်နာရီ Free ခိုင်းလို့ရပါတယ်
Dummysprit apk ကိုအရင်ဒေါင်းယူလိုက်ပါ..
ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ install လုပ်ပါ (မှတ်ချက်=> Root access ရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ)
ပြီးရင် apk ကိုဖွင့်ပါ.. အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ပြသွားပါ့မယ်..
အေကာက်ကပုံက အတိုင်း Clash of Clans Robot ဆိုတာကို install လုပ်ပေးပါ
install လုပ်ပြီးရင်တော့ RUN ပါ
login ဝင်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ် Register ကိုနှိပ်ပြီးတော့ အကောင့်အရင်ဖွင့်ပါ
အကောင့်လုပ်တာ လွယ်ပါတယ် နမူနာပြထားပါတယ် password ကို ဂဏန်းတွေချည်းပဲ ပေးတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်..invite code ကိုတော့ 585593 ကိုထည့်ပေးပါ success ဖြစ်သွားရင် Login ဝင်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ် ဝင်လိုက်ပါ.. login ဝင်ပြီးသွားတာနဲ့ COC robot ကို Run လိုက်ပါ COC ပွင့်လာပြီးတော့.. Tip တွေပြောပါလိမ့်မယ် Confirm နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Robot လေးစတင်အလုပ်လုပ်နေပါပြီ..
Auto DonateAuto Train
Auto Search Auto Collect အကုန်မိမိစိတ်ကြိုက် Setting လုပ်ပြီးတော့ Start ကိုသာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. အကုန်လုံးကို သူကိုယ်တိုင် အလိုလျောက် ဆက်လက် လုပ်ပါလိမ့်မယ်.. အဆင်ပြေကြပါစေ
တစ်နာရီထက် ပိုလိုချင်ရင်တော့ ဝယ်ပါ.. မဝယ်ချင်ရင်တော့ သူငယ်ချင်း ၁၃ ယောက်ကို Invite လုပ်ပြီးတော့ Register လုပ်ခိုင်းပါ.. Register လုပ်တိုင်း မိမိ invite Code ကိုထည့်ခိုင်းပါ 260bean ရပါမယ်။။ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Code ကိုထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်. 50bean ရပါမယ်.. စုစုပေါင်း 310Bean ရပါပြီ.. ဒါဆိုရင်တော့ Robot ကိုတစ်လစာ ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ။မိမိအတွက် Invite Code ကိုတော့ User Profile မှာပေးထားပါတယ်
ဘလော့ဆိုင်ရာစာအုပ်များစုစည်းမှု ( နှစ်သစ်အမှတ်တရလက်ဆောင် 2015 )
မြန်မာ နှစ်သစ်ကူး အမှတ်တရအနေနဲ့ ကျွန်တော် ရေးသားထားခဲ့သော BLOGGING ဆိုင်ရာ နည်းပညာ စာအုပ်လေများကို သူငယ်ချင်းများအား အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ်
ပြန်လည် မျှဝေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်.... ကျွန်တော် လေ့လာ ရှာဖွေ မှတ်သားမိသလောက် ဘလော့ဆိုင်ရာ
စုစည်းတင်ပေးလိုက်တာပါ...နောက်လည်း ဘလော့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ နည်းပညာ အပိုင်းအစလေးတွေကို ဆက်လက် လေ့လာရေးသားနေမှာဖြစ်ပါတယ်.... အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
BLOGS မှာ POST တင်နည်းhttp://pc.cd/nCh7ဘလော့ကိုအလွယ်ဆုံးပြုပြင်နည်းhttp://pc.cd/twh7Blogs မှာ LABELS ထည့်နည်း LINK ချိတ်နည်းအပြည့်အစုံhttp://pc.cd/zbb7Template ဒေါင်းယူနည်း နှင့် Template သွင်းနည်းhttp://pc.cd/cxh7BLOGSPOT ရဲ့ TEMPLATE တွေကို အလွယ်ဆုံးပြုပြင်နည်းhttp://pc.cd/Mwh7How To Invite Author & How To Accept ( Blogging )http://pc.cd/Bwh7BLOGS မှာအလွယ်ကူဆုံး MUSIC PLAYER ထည့်နည်းhttp://pc.cd/Xlh7How To Creat Apk For Your Website 0r Blogshttp://pc.cd/wKh7How To Do Your Blog Import-Export-Deletehttp://pc.cd/8lh7How To Do Your Web-Blogs Page Speed Fasterhttp://pc.cd/Txh7ဘလော့ကာတစ်ယောက်အတွက် သိသင့်စရာထွေထွေရာရာhttp://pc.cd/0Kh7ဘလော့မှာ Chat Roll အလန်းစားလေး နဲ့ ချက်ဘောက်ဖန်တီးကြမယ်http://pc.cd/ylh7မိမိတို့ဘလော့မှာ Power by Blogger ဆိုတာကိုဖြုတ်နည်းhttp://pc.cd/nxh7အားလုံး အဆင်ပြေ ကျေနပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း
www.aungsanmks.com Sunday, March 1, 2015
Root Asus Zenfone5V2.21.40.44
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်လည်း ပို့တွေမတင်တာကြာပါပြီ..... ဒီဖုန်းလေးကတော့တော်တော် တိုင်ပတ်ခဲ့လို့ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း တိုင်မပတ်ပဲ အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ သိပြီးသားသူတွေဆိုရင်ကျော်လိုက်ပါ.. မသိသေးသောသူများကတော့ ဆက်ဖတ်ပေါ့နော. ခ်ခ် အရင်ဗားရှင်းတွေတုန်းကတော့ bat ဖိုင်တစ်ခုကို run လိုက်ရုံနဲ့ အားလုံးကို သူ့အလိုအလျှောက် လုပ်ဆောင် သွားတာပါ.. အခု ဒီဗားရှင်းမှာတော့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး. ဒါကြောင့်ရှာရင်းဖွေရင်း ဒါလေးတွေ့လို့ အဆင်ပြေတာနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Build number T00J_ww 2.21.40.44 အတွက်ပါ လုပ်နည်းကလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်.. သေချင်ရှင်းပြပါ့မယ်။။ လိုအပ်တာလေးတွေကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ.
ADB Fastboot Tools https://www.mediafire.com/?m7w1rikq0axij9s
Root Zenfone5 Kitkat
ဒေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် .. ဆက်လိုက်ရအောင်.. စောစောက ဒေါင်းခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေထဲက ADB fastboot tool ကို Folder တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ ဖိုင်ဖြေထားပါ Fastboot.img ကိုလည်း အဲဖိုင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါ..
ပြီးရင် ဖုန်းကို USB debugging On ထားပါ. ပြီးသွားရင် ဖုန်းကို Droidboot ဝင်ရပါ့မယ် တနည်းအားဖြင့် Fastboot mode ဝင်ရမှာပါ.. Fastboot mode ဝင်နည်းကတော့ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ ပြီးရင် Power ခလုတ်နဲ့ Volume up ကိုတွဲဖိထားပါ ခဏကြာရင် Droidboot တက်လာပါလိမ့်မယ်.. အောက်ပါပုံအတိုင်းပါ.. Droidboot တက်ပြီဆိုရင် ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်လိုက်ပါ .. စောစောက ADB ဖိုင်ဖြေထားတဲ့ Folder ကို ဖွင့်ပါ အထဲမှ Open ကို နှိပ်ပြီးတော့ Run လိုက်ပါ CMD Windows တက်လာပါလိမ့်မယ်.. CDM command တစ်ကြောင်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.. fastboot flash fastboot fastboot.img ပြီးရင် Enter ကိုခေါက်လိုက်ပါ.. boot.img Flash လုပ်နေပါလိမ့်မယ်
ပြီးသွားရင် ဖုန်း Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်.. ဖုန်းပြန်တက်လာပြီဆိုရင် ဒေါင်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ RootZenfone5KitKatv3-ww ကိုဖွင့်ပြီးတော့ အထဲမှာ Root-Zenfone bat ဖိုင်ကို Run ပြီးတော့ Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ.. အလိုအလျှောက် လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်.. ခဏစောင့်နေလိုက်ပါ Reboot5ခါကျပြီးဖုန်းပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါ CMD မှာ All done, enjoy your ROOTED ZenFone5:) ပေါ်လာရင် Root လို့ပြီးပါပြီ..
သင့်ဖုန်းမှာ SuperSu လေးရောက်နေတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.. နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ လုပ်စရာ တစ်ခုကတော့ RootZenfone5KitKatv3-ww ဖိုင်ထဲက EnterShell bat ဖိုင်ကို run လိုက်ပါ ပြီးရင် su လို့ရေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ
ဖုန်းမှာ Superuser pomp တက်လာပါလိမ့်မယ်. Grant ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် ပြီးပါပြီ
အခုဆိုရင် Asus Zenfone5V2.21.40.44 ကိုအောင်မြင်စွာ Root လို့ပြီးပါပြီ အဆင်ပြေကြပါစေ..
Android Battery doctor
Android Format Factory
Apple Events 2013 မှတ်စု
Apple ID ဖွင့်နည်း
Asus phone root လုပ်နည်း
Cs6 All Product crack
i mobile root လုပ်နည်းများ
pc software များ
samsung root လုပ်နည်း
sim unlock လုပ်နည်း
Windows7Regal™ Business Edition 2014
နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ)
Android Application ရေးနည်းသင်တန်း
မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၄ အုပ် မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၄ အုပ် မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၄ အုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကို တစ်ချက်ရြှာ...
Bypass iOS Activation without Apple ID Bypass iOS Activation without Apple ID သင့်ရဲ့ လက်ထဲမှာ မူလပိုင်ရှင်ရဲ့ Apple ID ကို မသိလို့ Activate လုပ်မရတဲ့ iPhone တစ်လုံးရှိနေ...
window7တင်နည်း (မြန်မာလို)
window7တင်နည်း (မြန်မာလို) အခုနောက်ဆုံး နာမည်ကြီးနေတာကတော့ window7ပါ . ကိုယ်တိုင် window တင်ချင်သူများ. လက်တည့်စမ်းလု...
အချစ် + လက်ထပ်ခြင်း + တိတ်တိတ်ပုန်း + ဘ၀
အချစ် + လက်ထပ်ခြင်း + တိတ်တိတ်ပုန်း + ဘ၀ ပလေတို နဲ့ ဆိုကရေးတီးပြောတဲ့(အချစ် + လက်ထပ်ခြင်း + တိတ်တိတ်ပု...
Android Devices တွေအတွက် APK စုစည်းမှု
Android ဖုန်းတွေအတွက် applications အစုံအလင်ကို တစုတစည်းထဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... လင့်ခ်တွေကို ကလစ်တချက်နှိပ်တာနဲ့ ဒေါင်းလုပ်လင့...
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓန်
မင်္ဂလာပါဗျာ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ-- မြန်မာအင်္ဂလိပ် အဘိဓန် လိုချင်သူများအတွက် အဘိဓန်နှစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်သုံးကြည့်တာတော့ အဆင်ပြေတ...
12/15 - 12/22 (17)